တရုတ်စက္ကူထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများစိတ်ကြိုက်လက်ဆောင်ကဒ်နှုတ်ခွန်းအဖြူကြက်တူရွေး handwork မူရင်းထွင်းပေါ်လာ 3D | Jiujv
CUSTOM-မြားဖှဲ့ POP ကို ​​up Card များ
လကျဆောငျ boxes ပေါ်လာ
NEW နှစ်ချက်နှလုံးသားချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် 3D မင်္ဂလာဆောင်ကတ်ပါတီ Candy Ch ...
အလင်းနဲ့အရိပ် Led Lantern မီးသီးဗီဒီယိုအပိုင်းအစများစက္ကူဖြတ်အလင်း
Led အလင်းဖြတ်စက္ကူ Fox က Lantern ည Wallpaper အလင်း
နယူးဒီဇိုင်းပေါ့ပ် Up ကိုချယ်ရီပန်းလက်ဆောင်ပေးမယ် Box ကို
မင်္ဂလာမွေးနေ့ကိတ်မုန့်ပေါ့ပ် Up ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်
coroner ဘုရားကျောင်းစက္ကူဖြတ်ညှပ်အလှဆင် template ကို 3D ကဒ် Nice p ပေါ်လာ ...
3d စက္ကူအဖြူကြက်တူရွေး handwork မူလအစထွင်းပေါ်လာ ...
ရိုမန်းတစ် Sakura 3D လက်ဆောင်ကဒ်ပေါ်လာ
3d စက္ကူစိတ်ကြိုက်အဖြူကြက်တူရွေး handwork မူရင်းနှုတ်ဆက်လက်ဆောင်ကဒ်ထွင်းပေါ်လာ
ဒီအားလပ်ရက်ရာသီ PaperSpritiz ထံမှလက်ဆောင်ကတ်များနှင့်အတူချစ်ရသူတစ်ဦး Merry နေ့ဆန္ဒရှိ!
အလေးချိန်: အဆိုပါပေါ့ပ်တက်ကဒ် is37g ။
ပစ္စည်း : စက္ကူ
လက်ကား MOQ: 100PCS
MOQ Customize: 100PCS (လိုဂိုသို့မဟုတ်ပုံနှိပ်စာသားကို add)
♠ဖြစ်ရပ်များ, သင်သည်မည်သည့်အခါသမယများအတွက်ထုံးစံကဒ်ဒီဇိုင်းများကိုဖန်တီးရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်နာအကူအညီနဲ့ကြပါစို့။ ဤရွေ့ကား Pop-up ထုံးစံကတ်များကျိန်းသေသင့်ရဲ့ဖောက်သည်များအလွန်အံ့သြစေမည်!
ကြှနျုပျတို့၏ website သို့သွားရောက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, PaperSpiritz သင်ရွေးချယ်အကောင်းဆုံးမိတ်ဖက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
1) ပိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုသိရန်အလို့ငှာ, အခမဲ့နမူနာရရှိနိုင်
စတော့ရှယ်ယာများတွင် 2) ကျော် 300 မျိုးကွဲပြားခြားနားတဲ့ pop up Card များဖြစ်ပြီးသင်လိုချင်သောအရာကိုမဆိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
3)7ခွက်နှင့်အတူတစ်ဦးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဒီဇိုင်းဌာနများ။ OEM အလွန်အမင်းကြိုဆိုဖြစ်ပါသည်
DESTINATION သို့ Express Air လေကြောင်းလိုင်းအားဖြင့် ပင်လယ်ပြင်အားဖြင့်
မြောက်အမေရိက 3-4 ရက်အတွင်း 5-7 ရက်အတွင်း 22-28 ရက်အတွင်း
တောင်အမေရိက 4-6 ရက်အတွင်း 5-7 ရက်အတွင်း 25-30 ရက်အတွင်း
ဥရောပ 3-4 ရက်အတွင်း 4-6 ရက်အတွင်း 17-25 ရက်အတွင်း
Oceania 3-4 ရက်အတွင်း 4-6 ရက်အတွင်း 18-22 ရက်အတွင်း
အာရှတိုက် 3-4 ရက်အတွင်း 4-6 ရက်အတွင်း 15-20 ရက်အတွင်း
အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ 3-4 ရက်အတွင်း 5-7 ရက်အတွင်း 20-25 ရက်အတွင်း
အာဖရိကတိုက် 4-6 ရက်အတွင်း 9-12 ရက်အတွင်း 50-60 ရက်အတွင်း
100 အ PCs 1-3 အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်း
500 PCs 5-7 အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်း
1000 PCs 9-12 အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်း
Process ကို Customize
1. အမိန့်သွင်းပါ သင်ဟာအီးမေးလ်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့စိတ်ကူးများ, ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများတင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်အမိန့်ထားပါ။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းဟာဒီဇိုင်နာသငျသညျကိုခစျြပါလိမ့်မယ်မိမိစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များပေးလိမ့်မည်။ တတ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်ဖြစ်ပေးပါ။ သင်ကမျှဝေအဆိုပါနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်ပိုမိုလွယ်ကူသင်တို့အဘို့မျှော်လင့်နေသောကြည့်ဖမ်းဆီးဖို့ရန်သင့်ဒီဇိုင်နာအဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
2. ငွေပေးချေမှု ပုံစံဒီဇိုင်းအခကြေးငွေများ FULL ငွေပေးချေမှုသင့်ရဲ့အမိန့် processing မတိုင်မီလိုအပ်ပါသည်။ ငွေပေးချေမှုအပျေါမှာ, သင့်အပြည့်အဝပေးချေမှု Non-အမ်းဖြစ်လာကြောင်းသတိပြုပါ။ PayPal ကသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးအာမခံချက်ကနေတစ်ဆင့်အားလုံးငွေပေးချေမှုပေးပို့နိုင်ပါသည်။
3. ယူမှုအတည်ပြုချက် သင့်ရဲ့အမိန့်တင်သွင်းနေသည်နှင့်သင့်ငွေပေးချေမှုပြုတပြိုင်နက်, ဒီဇိုင်နာသင့်ရဲ့အဆိုပြုဒီဇိုင်း preview ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ preview ကိုအဖြစ်မကြာမီကအဆင်သင့်ဖြစ်သကဲ့သို့သင်တို့ဆီသို့မေးလ်ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
4. DESIGN ခွင့်ပြုချက် ကိုသင်ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းအားလုံးရှုထောင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီးသင်က 100% ပျော်ရွှင်နေကြသည်ဟုခံစားရသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျနော်တို့နမူနာလုပ်နေတာစတင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ နမူနာအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့သင်္ဘောမရောက်မီအတည်ပြုချက်ကိုသင်ဓါတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကိုယူပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါသင်္ဘောကုန်ကျစရိတ်) သင်အားဖြင့်ပေးဆောင်ရပါမည်။
ယခင်: တရုတ်စက်ရုံကတ်များပေါ်လာလက်ဖြစ်ရောင်စုံဒေါင်း customize
နောက်တစ်ခု: အပိုမှတ်စုကဒ် & စာအိတ်နှင့်အတူပေါ့ပ် Up ကိုကတ်ဖြတ်တောက်လှပသောလိပ်ပြာလေဆာ
ရယ်စရာကြောင် 3D popups နှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်
Card ကို Pop ဂီတ Up ကိုနှုတျဆကျကွံ့ & သက်တံ့ရောင် 3D ...
ပေါ့ပ် Up ကိုကတ်ဖြတ်တောက်လှပသောလိပ်ပြာလေဆာ ...
တရုတ်စက်ရုံလက်ဖြစ်ရောင်စုံ peaco customize ...
Flamingo Bird ကို 3D Pop-up Card များကိုနေချင်စဖွယ် H ကိုနှုတျဆကျ ...
ထုံးစံကို Creative ထမ်းရွက်ဒီဇိုင်းကိုစက္ကူမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာများ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာ Subscribe to:
4th Floor, NO.359 Yinxi လမ်း2တည်ဆောက်ခြင်း။ , Jiuting မြို့, Songjiang Distric, ရှန်ဟိုင်း, တရုတ်
စက္ကူလက်ဆောင်များ, ခရစ္စမတ်ကဒ်များ Up ကို Pop, Pop ဂီတ Up ကိုကဒ် , မိခင်ရဲ့နေ့ကဒ်များ Up ကို Pop, ကဒ်များ Uk Up ကို Pop, diy ပေါ့ပ် Up ကိုကဒ်များ,